Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 4)
Sida loo demiyo raad-raaca soo-gaadhista COVID-19
IOS 13.5, waxay la timid howl ay hirgeliyeen Google iyo Apple, si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka laga yaabo inuu ku dhaco cudurka coronavirus
Corona Datenspende, oo ah barnaamijka Jarmalka ee lagula dagaallamayo coronavirus
Jarmalka gudahood waxay horey u haysteen codsigooda si ay ula dagaallamaan Covid-19 xogta dadka isticmaala ee doonaya inay isdiiwaangeliyaan, waxaa loo yaqaan Corona Datenspende
Aaladda Apple batteriga jilicsan ee aaladaha mustaqbalka isku laaban
Apple wuxuu rukhsad u leeyahay baytari dabacsan oo loogu talagalay aaladaha isku laabma mustaqbalka. Tani macnaheedu maahan inay sii deynayaan waqti dhow, ama weligood.
FaceTime: Barnaamijka Badbaadada Wicitaanka Fiidiyowga ee ugu Amni?
FaceTime waxay umuuqataa inay iskood isku taagtay barnaamijka ugu amaanka badan ee wicitaanka fiidiyaha kadib fadeexado kadhacay shirkado badan iyo bixiyeyaal
Isdhexgalka WhatsApp ee Facebook ayaa ku dhow
Tilmaamo cusub oo ku saabsan is dhexgalka WhatsApp iyo codsiyada Facebook ayaa ka muuqda noocyada tijaabada ee Android iyo iOS
Taabashada Haptic ma la socoto ogeysiisyada cusub ee iPhone SE
Dhowr isticmaale ayaa soo sheegaya in iPhone-ka cusub ee SE, Apple-ka qiimaha jaban, ee uusan haysan Haptic Touch ogeysiisyada.
British NHS waxay diiday Apple-Google COVID-19 xiriirada API
NHS-ta Ingiriiska ayaa diiday Apple-Google COVID-19 xiriir API. Waxay doorbidaan inay udub dhexaad u noqdaan xogta ku jirta server-ka ay leedahay dowladda Ingiriiska.
Sida laga soo xigtay Wall Street Journal soosaarka iPhone 12 wuxuu dib ugu dhacaa bil bil ahaan Coronavirus awgeed
Wargeyska The Wall Street Journal ayaa faafiyey in dib u dhaca suurtagalka ah ee soo deynta iPhone 12 ay ugu wacan tahay dhibaatada Coronavirus.
Ball Pass 3D, dib-u-cusbooneysiinta mid caadi ah si waqtiga loo dhaafo
Ball Pass 3D, ciyaar fudud oo buuxin karta waxyaabaha kaa dhimman inta udhaxeysa cutubyada Netflix.
Dhammaan tilmaamaha aad ku isticmaali karto Trackpad-ka iPad-ka
Waxaan ku tusineynaa dhammaan tilmaamaha aad ku qaban karto trackpad ku xiran iPad-kaaga, iyo sidoo kale aaladaha ay tilmaammadu ku habboon yihiin.
Sida loo beddelo qaabka duubista ee iPad-kaaga adigoo isticmaalaya trackpad
Waxaan ku baraynaa inaad wax ka beddesho jihada qoritaanka, inta udhaxeysa dabiiciga iyo macmalka, ee iPad-kaaga markaad isku xirto trackpad ama jiir dibadeed.
Apple iyo Google waxay bixiyaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamkooda dabagalka ee ka dhanka ah COVID-19
Apple iyo Google waxay na siinayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida nidaamkooda dabagalka uu uga shaqeyn doono inuu gacan ka geysto la dagaallanka COVID iyadoo diirada la saarayo arrimaha gaarka ah.
Apple ayaa bilawday meel cusub si ay ugu dhiirrigeliso iPhone SE cusub shabakadaha bulshada
Muxuu noqon doonaa ku dhawaaqista cusub ee iPhone SE waa la sifeeyey. Loogu talagalay shabakadaha bulshada, waxay noo sheegaan astaamaha ugu muhiimsan ee iPhone SE.
Tifaftirka fiidiyowga wuxuu u yimaadaa Darkroom cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay
Barnaamijka tafatirka sawirka caanka ah, Darkroom, ayaa lagu cusbooneysiiyay taageero xoog leh oo loogu talagalay wax ka beddelka fiidiyowyada fiidiyowga oo leh mashiin cusub oo haya.
Apple Music hadda waxaa laga heli karaa Samsung TVs
Habka cusub ee Apple iyo Samsung wuxuu kudhamaanayaa imaatinka barnaamijka Apple Music ee Samsung Smart TVs.
Sonos waxay u soo bandhigeysaa adeegga raadiyaha dhammaan dadka ku hadla waxayna ugu dabaaldegtaa qiimo dhimis dhan € 50
Sonos wuxuu ku boodayaa suuqa muusikada qulqulka isagoo abuuraya Sonos Raadiyo leh idaacado u gaar ah oo ay martigeliyaan farshaxanno caalami ah oo caan ah
Apple wuxuu bilaabayaa meel wanaagsan oo lagu kobciyo iPad Pro iyo Keyboard cusub ee Magic
Apple wuxuu bilaabayaa meel cusub oo kor uqaadaya Keyboard-ka Magic-ka ee ku xigta iPad-ka cusub, isagoo iftiiminaya sabeynta uu ku leeyahay kumbuyuutarka cusub.
Kiiboodhka sixirka ee loogu talagalay dib-u-eegista iPad Pro: si khatar ah ugu dhowaanshaha MacBook.
Waxaan dib u eegnay Keyboard-ka sixirka ee loo yaqaan 'iPad Pro', kaas oo keena waxyaalaha waaweyn oo dhan oo ku saabsan kumbuyuutarka caadiga ah ee loo yaqaan 'MacBook keyboard' iyo 'trackpad' ee looxa Apple ah.
Xanta cusub: iPad Air oo leh ID ID shaashadda hoosteeda iyo MacBook leh ARM processor
Xanta cusub: iPad Air oo leh ID ID shaashadda hoosteeda iyo MacBook leh ARM CPU. Akoon Twitter ah oo caan ku ah xanta guusha ayaa heesay toddobaadkan.
IPhone SE waa tallaabo Apple ah oo ka reebaysa kuwa la tartamaya ciyaarta
Apple waxay soo saartay iPhone SE oo ka yar $ 400 waxay bixisaa qeexitaanno ay inyar oo tartamayaasheedu la jaan qaadi karaan.
IPad-ka cusub looma qorsheynin in sawirro laga qaado, kamaradaha ayaa ka liita kuwa iPhone 11
Ragga ka socda barnaamijka caanka ah ee Halide waxay falanqeeyaan kamaradaha iPad-ka cusub waxayna xaqiijinayaan in kasta oo dareeraha LIDAR ay ka fog yihiin kuwa iPhone 11.
Qeybinta IPhone-ka ayaa ku kordheysa Shiinaha inta lagu jiro bisha Maarso
Waxa ugu dhow ee caadiga ah marka la eego qeybinta taleefanka iPhone-ka ee Shiinaha ayaa yimid dhammaadkii Maarso sida laga soo xigtay ilo kala duwan
Isbarbardhiga nolosha batteriga ee iOS 13.4.1, iOS 13.4 iyo iOS 13.3.1
Cusboonaysiinta ugu dambeysa ee loo heli karo macruufka, lambarka 13.4.1, ayaa si dhib leh u saameeya nolosha batteriga ku dhowaad dhammaan moodooyinka marka laga reebo iPhone XR.
Waxyaabaha ugu muhiimsan, akhristaha PDF ee cilmi-baarayaasha, wuxuu aqbalayaa iibka guud ee iPhone, iPad, iyo Mac
Ragga ku jira Hishlights, akhristaha PDF ee cilmi baarayaasha, waxay ku biirayaan qaabka rukunka guud ee loogu talagalay inaan ugu adeegsanno dhammaan aaladahayaga
Dhibaato cusbooneysiinta watchOS 6.2? Sidan ayaa lagu xaliyaa
Haddii dhibaato kaa haysato cusbooneysiinta Apple Watch-kaaga si aad u daawato 6.2OS ama wixii ka dambeeya, waa tan sida loo xaliyo tan.
Jilaaga A11 ee wararka xanta ah ee ku saabsan AirPower
Apple wuxuu siin karaa guntinta A11 nolol labaad adoo gelinaya AirPower. Xanta ayaa mar kale tilmaamaysa shaqada shirkadda ee saldhigga lacag-bixinta
WhatsApp ma ahan faaf reeb fariimaha noocuu doono ha ahaadee
WhatsApp ma faafreebid nooc kasta oo maaddo ah. Waxaan sharxeynaa sida xaddidaadda gudbinta farriimaha WhatsApp ay u shaqeyso.
Sagaal tabaha si aad uga faa'iidaysato iPad-kaaga
Waxa aan maanta kuu keenayno waa taxane khiyaanooyin ah oo kuu oggolaanaya inaad sida ugu badan uga faa’iideysato iPad-kaaga isla markaana aad u ogaato wax kasta oo aad dhaqso ugu qaban karto.
Apple iyo Google waxay ku biireen xooggooda dagaalka ka dhanka ah coronavirus
Midawga Apple iyo Google ee ka dhanka ah coronavirus waxay noqon kartaa talaabo weyn oo loo qaado xakamaynta cudurka faafa ee adduunka oo dhan ku haya hubinta.
Nooca cusub ee rasmiga ah ee watchOS 6.2.1 ayaa la siidaayay
Apple waxay si rasmi ah u siideysaa nooc cusub oo ah watchOS 6.2.1 dhamaan isticmaaleyaasha si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta FaceTime
Keyboard-ka sixirka leh ee trackpad ayaa suuqa soo gali doona dhamaadka bisha May sida ay sheegayso Amazon UK
Ka dib markii uu kansal gareeyay munaasibadii bandhigga ee ay Apple qorsheyneysay in ay qabato bisha Maarso, dhacdo aysan ku dhawaaqin, ...
Apple waxay tixgelinaysaa iibsashada NextVR
NextVR waxay noqon kartaa iibsiga xiga ee Apple si loo hagaajiyo nidaamkiisa dhabta ah ee kororka ah ama teknoolojiyada ku wajahan qeybtaas
Sidee loo hagaajiyaa xawaaraha jawaabta ee 3D Touch iyo jawaabta haptic
Markii la sii daayay iOs 13, Apple wuxuu ballaariyay shaqada aaladda 'haptic sensor' si loogu daro ficillo deg deg ah iyo in ka badan…
Sida loola wadaago fiidiyowyada iyo sawirrada Sawirrada Google qaabka fariinta cusub
Aaladda fariimaha cusub ee lagu daray Sawirada Google, hadda way fududahay in lala wadaago oo laga faalloodo sawirrada iyo fiidyowyada
Apple waxay iibsatay shirkadda Voysis ee sirdoonka macmalka ah
Iibsigii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu mar kale cadeynayaa in Siri ay tahay inuu horumar sameeyo si uu u noqdo bedel Google iyo Alexa.
Apple wuxuu ku abaal mariyaa hacker caawimadiisa $ 75.000. Wuxuu ku heli karaa kamaradda iPhone-ka si fudud isagoo booqanaya websaydhkiisa oo ay la socdaan Safari.
Waa xaqiiqo: IPhone 9 ayaa ka muuqda koodhka iOS 13.4.5
Marar badan rakibida betas waxay leedahay waxyaabo xiiso leh heerka isticmaalaha, dhab ahaantii waxaan ku rakibnaa mid kasta ...
IPhone-ka ugu dhow 9: ayaa dacwad ka gudbiyay Best Buy
Dacwad uu kashifay qof ku dhow silsiladda Best Buy ee dukaamada, ayaa xaqiijin doonta bilaabitaanka soo socda ee iPhone 9 ama iPhone SE 2
U nuglaanta macruufka ayaa ka hortageysa VPNs inay sir ku dhigaan dhammaan taraafikada
Jilicsanaan ku jirta macruufka 13.3.1 iyo goor dambe ayaa la ogaaday inay ka hortageyso VPN-yada inay sir-geliyaan dhammaan taraafikada internetka ee ay soo saaraan qalabkeenna.
CarPlay-daaqado badan ayaa hadda la jaan qaadaya barnaamijyada hagidda dhinac saddexaad
IOS 13.4 waxay u keentaa barnaamijyada marin-u-socodka dhinac saddexaad awood u leh inay daaqado badan ka daalacaan bogga guriga ee iOS 13.
The "Optimized Charge" ee iPhone ayaa kugula socodsiinaya ogeysiin shaashadda ah
Kordhinta lacag bixinta markay si fiican u shaqeyso waxay noo soo direysaa ogeysiis si looga digo waqtiga ay iPhone dhammeyn doonto amarka, haa, way shaqaysaa
Apple wuxuu si wadajir ah ula abuuraa CDC degel gaar ah COVID-19
Apple waxay bilaabeysaa degel wada shaqeyn ah Aqalka Cad, CDC iyo FEMA si loo siiyo qalab waxtar leh muwaadiniinta ku saabsan COVID-19.
Muraayadaha 'Apple' ee loo yaqaan 'AR' ayaa la sii deyn karaa sannadka 2022
Muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay ayaa la qorsheyn lahaa in la soo saaro inta lagu jiro sanadka 2022 sida laga soo xigtay ilo ku dhow DigTimes
Soo saarista IPhone-ka ayaa joogsaday Hindiya
Xiritaanka howlaha ka socda Hindiya, waxay saameyn ku yeelatay, markale, wax soo saarka Apple ee dalka, xiritaanka oo doonaya in laga hortago fiditaanka cudurka coronavirus ee dalka.
IPhone-yada leh 5G waxaa dib u dhigi kara Covid-19
Apple waxay dhibaato kala kulmi laheyd soo saarida iphone-ka cusub ee tiknoolajiyadda 5G sida ay qortay warbaahinta Nikkei. Dib u dhacan waxaa sabab u ah Covid-19
Nomad wuxuu soo saarayaa kiiska cusub ee maqaar-biyoodka biyuhu u galaan AirPods Pro
Si ka duwan moodeellada kale ee sameecadaha dhagaha ee Apple ay noo diyaariso, AirPods iyo noocyadooda, ma ...
IOS 13.4 hadda waa la heli karaa waxayna ku timaaddaa dhammaan wararkan
Kuwo badan ayaa ah shirkadaha adduunka oo dhan ee qaatay shaqada taleefanka si aan gabi ahaanba loo joojin shirkadda, ...
Sida loo dhaqaajinayo zoom-ka Apple Watch
Maanta waxaan arki doonaa sida aan ugu dhaqaajin karno dhaweyd shaashadda Apple Watch-ga qaab fudud oo ka mid ah saacadda lafteeda ama iPhone-ka.
Sida loo tirtiro qalabka Disney +
Waxaan kuu sharxeynaa sida looga saaro aaladda akoonkaaga Disney + markii aad gaarto xadka 10 aaladood oo adeeggu leeyahay.
Sida loo isugu xiro badhanka jiirkaaga iPadOS
Waxaan ku tusineynaa sida loo jaangooyo jiirka iPad-ka si loogu shubo badhan kasta shaqooyin kala duwan, la beddelo tilmaamaha oo loo isticmaalo geesaha firfircoon.
Google sidoo kale waxay joojisaa munaasabadda khadka tooska ah ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Ka dib markii la joojiyay dhacdooyinka khadka tooska ah ee Google I / O 2020, Apple wuxuu raaci karaa isla kiisaska, maadaama ay ku jirto isla xaaladdii Google
Saldhiga lacag bixinta AirPower wuu kusii socon karaa horumarka
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple wali waxay ku shaqeyneysaa saldhig lacag la aan ah, oo la mid ah AirPower oo ay joojisay sanadkii hore.
Sida looga saaro iPhone qufulo kala duwan
Ka takhalusida qaar ka mid ah qufulada aan ka heli karno iPhone-keena, ha ahaado mid cusub ama gacan labaad, waa geedi socod aad u fudud oo leh LockWiper
CarPlay ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku hagaajiso asalka macruufka 14
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee umuuqda inuu la imanayo macruufka 14 waxay noqon doontaa suurtagalnimada in lagu beddelo asalka CarPlay lacagaha laga heli karo iPhone-ka.
Sidan ayaa sida jiirku ugu shaqeeyaa iPadOS 13.4
iPadOS 13.4 waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno jiirarka Bluetooth iyo trackpads-ka ipad-keena. Waxaan ku tusineynaa sida muuqaalkan cusub ugu shaqeynayo fiidiyowga.
Logitech wuxuu kiiska saxda ah ku bilaabayaa trackpad-ka iPad (2019) iyo iPad Air
Isgaarsiinta hadaan nahay waxaa nalooga baahan yahay inaan yeelano xasilooni gaar ah iyo ujeedo gaar ah markaan kahadleyno alaabada, maxaa yare ...
Sida loo sameeyo wicitaanada fiidiyowga kooxeed ee WhatsApp
WhatsApp waxay bixisaa ikhtiyaarka ah in la sameeyo wicitaano fiidiyoow kooxeed leh dhowr illaa saddex qof, waxaan ku baraynaa sida si fudud loogu sameeyo
Apple waxay bilaabi doontaa iOS 13.4 bisha Maarso 24 si ay u siiso Trackpad taageero iPads
Trackpads iyo jiir ayaa noo keeni doona hab cusub oo aan kula macaamili karno iPad-kayga 24-ka Maarso taas oo ay uga mahadcelinayaan iOS 13.4 iyo iPadOS 13.4
Codsiyada lagu jimicsado guriga [# QuédateEnCasa]
Waxaan kuu keenaynaa afar codsi oo aad awood ugu yeelan karto inaad ku sameyso isboorti si aad ugu hogaansato # StayAtHome oo aad u joojiso Coronavirus.
Waxaan haysan doonaa iPhone 9 iyo 9 Plus sida ku cad iOS 14
Apple waxay ku dhowdahay inay soo saarto 9-inji iPhone 4,7 ah iyo 9-inji iPhone 5,5 Plus ah oo ah noocyo ka jaban noocyadeeda.
New Powerbeats 4 ayaa ka muuqda khaanadaha Walmart ka hor bilaabista
Waxay u badan tahay kormeer ka socda shaqaalaha Walmart, Powerbeats 4 cusub ayaa horeyba loo iibiyaa ka hor inta aan la soo bandhigin.
Apple wuxuu ku dhawaaqay WWDC 2020 khadka tooska ah bisha Juun
Apple waxay ku dhawaaqday WWDC 2020 bisha Juun iyada oo qaab cusub oo toos ah khadka tooska ah ugu wacan dhibaatada Coronavirus
Kaamirada cusub ee 3D "World-Facing" ayaa imaan doonta sanadkan ugu yaraan iPhone
Kaamirada cusub ee "World-Facing" 3D ayaa sanadkaan imaaneysa ugu yaraan hal iPhone. Waxay yeelan doontaa nidaam laser ah oo la mid ah kamaradda hore ee Face ID-ku adeegsado.
Ogeysiiska cusub ee AirPods Pro wuxuu muujinayaa buuqa ka noqoshada iyo qaabka hufnaanta
Ragga ka socda Apple ayaa xayeysiis cusub soo dhigay kanaalkooda YouTube halkaas oo ay ina tusayaan sida baajinta dhawaaqa AirPods Pro
Hadda Apple waxay kugula talineysaa isticmaalka masaxa jeermiska jeermiska ee qalabkeeda
Hadda Apple waxay kugula talineysaa isticmaalka masaxa jeermiska jeermiska ee qalabkeeda. Wuxuu marwalba diiday isticmaalka dareerayaasha si looga fogaado waxyeelada qalabka, hadana wuu kula talinayaa.
Dhacdada Apple ee bisha Maarso mar hore ayaa la baajin lahaa coronavirus darteed
Waxay ku dhowdahay rasmi ahaan in furaha Apple ee la filayay dhamaadka bishan Maarso aan la fulin doonin sababtoo ah coronavirus ama Covid-19
Waxaan kuu sheegaynaa sida looga wareejiyo sawirada ka iPhone in computer, haddii aad leedahay Mac ama Windows PC ah. Maxay yihiin ikhtiyaarrada jira ee lagu koobi karo sawirradaada ama fiidiyowyadaada? Soo ogow
Iibinta IPhone ayaa hoos udhacay 60% sababtoo ah coronavirus
Iibinta Apple ee Shiinaha ayaa hoos u dhacday 60% marka loo barbar dhigo isla muddadaas 2019
Fikradda IPhone 12 oo leh 6 kaamiro, hologram iyo waxyaabo kaloo badan
Fikrad cusub oo ah iPhone 12 ayaa nooga dhigeysa 6 lenses oo xagga dambe ah, hologram iyo shaashad dhinacyada iPhone lafteeda ah.
Filimkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee TV-ga Apple + Hoyga Kahor Madoow
Waxaan horeyba uheysanay awoodeena koowaad ee taxanaha soo socda ee ku imaan doona adeegga fiidiyowga ee Apple: Guriga Kahor Madoobaadka
Sonos ayaa ka fikiraya, mar dambe ma xiri doono aalado hore
Hada Sonos wuxuu go aansaday inuu gadaal la aado isagoo ku xayiraya hadaladii hore "recycle mode" wuxuuna raadiyay xal qanci kara dhamaan.
Waxaan kuu sharraxeynaa sida looga wareejiyo dhammaan farriimahaaga WhatsApp-ka ah iPhone illaa Android ama dhinac kale, adiga oo aan lumin sawiradaada ama fiidiyowyadaada.
Steve Wozniak, la kulan aasaasaha shirkadda Apple
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa Steve Wozniak si aad ula kulanto cida ahayd muuqaalka kale iyo aasaasaha yar ee Apple.
Xanta ku saabsan iPhone 12 waxay ku dartaa batari dheeri ah iyo kamarad 64MP ah, iyo warar kale
Xanta ku saabsan tusaalaha soo socda ee iPhone-ka ayaa tilmaamaya hagaajinta dareeraha kamaradda, midabka casaanka ee dhammaan moodooyinka iyo hagaajinta kale
Mac mini ayaa la cusbooneysiin doonaa iyo iMac cusub oo jidka ku jira
Sida laga soo xigtay "leaker" qarsoodi ah, waxaan arki doonnaa Mac Mini cusub, iMac cusub iyo dabcan iPad Pro cusub oo dhowaan soo socda, diyaar ma u tahay?
IPhone gaabiska wuxuu ku kacayaa Apple 500 milyan
Muuqaalka yareeyay waxqabadka iphone-ka dhibaatooyinka batteriga ayaa Apple ku kici doona ilaa $ 500 milyan.
Apple wuxuu hagaajinayaa patent-ka iPhone-ka ee isku laaban oo leh cusbooneysiin
Patent-ka Apple waa ku dhowaad maalin kasta kiiskanna shati horay loogu diiwaangeliyey oo ku xirnaa birihii iPhone-ka laaban lahaa ayaa la horumariyay
Shirkado Kala Duwan Oo Ka Kooban Shirkada Apple Oo Lagu Eedeeyey Inay U Geysteen Dad Uighurs Ah
Qaar kamid ah alaab-qeybiyeyaasha ka kooban iphone iyo iPad ayaa lagu eedeeyay inay addoonsadeen qowmiyadda muslimiinta Uighur ee deggan Shiinaha.
Bixiyaha kaamirooyinka iPhone-ka ayaa xirmaya marka qof qaba cudurka uu ogaado coronavirus
Qeybta LG ee soo saarta kaamirooyinka iPhone-ka, ayaa soo saartay kiis coronavirus ah oo ka socda warshaddeeda waxayna ku dhaqaaqday inay si ku meel gaar ah u xirto
Maxaa la sameeyaa haddii mid ka mid ah AirPod-yadaadu uusan si sax ah u shaqeynaynin?
Maxaa la sameeyaa marka mid ka mid ah labada (ama labadaba) AirPods uusan shaqeyn? Tallaabooyinka la raacayo waa kuwo fudud oo ka kooban soo celinta xiriirka la leh iPhone-keena.
Maalin kasta - Aynu ka hadalno samaacadaha dhagaha
Apple waxay ku guuleysatay inay soo bandhigto cunsur cusub oo ay ku xisaabtamayaan markay iibsanayaan samaacadaha dhagaha: waaya aragnimada isticmaalaha
Kiiboodhka cusub ee iPad Pro waxaa ku jiri doona trackpad
Jiilka soo socda ee iPad Pro wuxuu la imaan doonaa Keyboard cusub oo Smart ah oo ay ku jiri doonaan trackpad.
Batariga laga saari karo iPhone? Taasi waa waxa EU rabto
Midowga Yurub wuxuu miiska saarayaa soo jeedin si aaladaha mobilada oo dhami u leeyihiin baytariyada la saari karo
Heerka 802.11ay Wi-Fi wuxuu noqon karaa riixitaankii ugu dambeeyay ee Muraayadaha Apple
Muraayadaha Apple waxay lahaan karaan heerka 802.11a WiFi kaarka buunka ee ay doorbidayaan. Xiriirintani waxay u oggolaaneysaa gudbinta xogta sare iyo daahitaan hoose
IPhone XR wuxuu ahaa garaacistii 2019, mana aanan la yaabin
Sidii horeyba uga dhacday 2018, sanadkan 2019 iPhone XR wuxuu ahaa aaladda ugu iibinta badan suuqa, illaa iyo hadda.
iMyFone Fixppo: Sida loo dayactiro iPhone, iPad ama Apple TV Black Screen
Dhibaatooyinka ay soo bandhigi karaan iPhone, iPad ama Apple TV waxay leeyihiin xal aad u fudud oo ay ugu mahadcelinayaan codsiga iMyFone Fixppo. Waa maxay faa'iidooyinka ay bixiso?
Apple iyo Johnson & Johnson waxay bilaabeen daraasad si loo yareeyo khatarta istaroogga
Caafimaadka ayaa noqday arrinta ugu sareysa Apple. Oo waxay umuuqataa mid aniga aad iigu guulaystay. Waxaan ka soo qeyb galeynaa intaa iyo in ka badan ...
Apple uma ogola wax xun filimku inuu isticmaalo iphone
Weligaa ma arki doontid filim kaas oo ninka xun, ama kuwa xun, u isticmaalayaan iPhone ama wax soo saar kale oo Apple ah.
Waxyaabaha kale ee soo bandhigi kara OLED ee Apple, BOE Technology Group
Shirkadda Shiinaha, BOE Technology Group, ayaa ballaarin doonta khadadka wax soo saarkeeda si ay u keento shaashadda OLED ee loogu talagalay iphone Apple
Safar loo galay Dooxada Dabka, ayaa ah «Shot on iPhone» cusub
Fiidiyow cusub oo ku saabsan Apple's Shot ee ololaha iPhone. Xaaladdan oo kale "Dooxada Dabka" ee Las Vegas waa halyeeyada ugu weyn.
Qualcomm wuxuu soo bandhigayaa modemkiisa cusub ee 5G ee loogu talagalay iPhone 12?
Shirkadda Qualcomm ayaa ku dhawaaqday modgeeda cusub ee 5G munaasabad ka dhacday San Diego, oo ah modem ay u badan tahay inuu noqon doono midka ay ku jirto iPhone 12
IPhone 12 oo leh nooc gaaban oo gaaban iyo WiFi iyo AirTags oo leh fiilo wireless ah
Xanta cusubi waxay noo sheegaysaa wax ku saabsan WiFi cusub oo la jaan qaadaya iPohne 12 ee soo socda iyo ku-dallaca wireless-ka ee AirTags
Tabaha ugu fiican ee loo isticmaalo WhatsApp sida pro
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa fiidiyow iyo cashar la socda tabaha ugu fiican ee WhatsApp loogu adeegsado khabiir ahaan, imisa ka mid ah ayaad hore u soo ogaatay ka hor?
Sida loo beddelo qaabka HEIC ee sawirro badan hal mar oo aan lahayn barnaamijyo dibedda ah iyo bilaash
Waxaan ku tusineynaa cashar gaaban si aad hal mar u wada badali karto qaabka sawiro badan. Gebi ahaanba xor ka ah Mac
Sida loogu isticmaalo Gaadiidka Dadweynaha Khariidadaha Apple
Waxaan ku tusineynaa sida ay u shaqeyso Khariidadaha cusub ee Gaadiidka Dadweynaha, oo leh dhammaan xulashooyinka ay na siiso, kuwaas oo aan yareyn.
31-ka Maarso waxay noqon kartaa taariikhda bandhigga ee iPhone 9
Wax walba waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan inaan horey u ogaanay taariikhda rasmiga ah ee soo bandhigida ee iPhone 9, taariikh loo dejiyay 31-ka Maarso
Apple waxay u naqshadeysaa anteeno 5G u gaar ah iPhone-ka
Kadib warar badan oo ku saabsan tikniyoolajiyadda Apple ay u adeegsan doonto inay ku xirxirto iphone-keeda teknoolojiyadda 5G, waxay umuuqataa in ...
Sida loo arko shaashadda iPhone-ka ee TV-ga leh Chromecast
Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida aad u muraayadsan karto shaashadda iPhone-kaaga ee TV-ga adigoo isticmaalaya Chromecast oo gebi ahaanba bilaash ah.
Firfircoon ama barkinta ka jooji dirista rasiidhada rukunka sidaad u jeceshahay
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo ama loo joojiyo dirida rasiidhada naga soo gala iPhone.
Sida loo qaabeeyo jawaabaha caqliga badan ee Apple Watch
Sida loo habeeyo jawaabaha caqliga leh ee Apple Watch. U beddel jawaabaha caadiga ah ee Apple ee kuwaaga shaqsiyadeed.
Sida loo Qariyo Sawirada iyo Fiidiyowyada iPhone Gallery
Waxaan ku tusineynaa casharkaan fudud sida aad ugu qarin karto sawirada iyo fiidiyowyada shaashadda iPhone-ka isla markiiba.
Waxaan uxaraareynaa liisamada TVSofa, markaa waxaad raaci kartaa taxanaha aad jeceshahay iyo filimada
Waxaan uxidhnaa liisamo dhowr ah oo loogu talagalay TVSofa, oo ah codsi heer sare ah oo loogu talagalay kormeerka taxanaha aad jeceshahay iyo filimada kujira iPhone iyo iPad.
Disney + waxay gaaraysaa 28 milyan oo macaamiil ah
Nofeembar 2019 waxay ahayd bil muhiim u ah qaybta fiidiyoowga fiidiyoowga ah, laba waawayn ayaa horeba ugu soo biiray: Apple ...
TVSofa, oo muhiim u ah kuwa jecel taxanaha iyo filimada
Taxanaha iyo dadka filimada jecel waxay ku jiraan nasiib maxaa yeelay waxaan aakhirkii haysannaa arji isku keenaya wax walba oo aan raadineynay hal meel.
Sida loo rakibo shahaadada dhijitaalka ah Mac-gaaga iyo iPhone-kaaga
Waxaan rabnaa inaan ku tusno casharkaan yar sida aad si fudud ugu rakibi karto shahaadadaada dhijitaalka ah labada Mac iyo iPhone-kaaga.
Sida loo demiyo Apple's Ultra Wideband iyo keydinta batteriga
Ultra Wideband-ka Apple ee ka faa'iideysta U1 Chip waa la jari karaa waana ku tusineynaa sida aad u sameyn karto.
U beddel fallaarta khariidadaha Google ee caajiska ah ee baabuurka (TUTORIAL)
Waxaan ku tusineynaa sida loogu badalo fallaarta khariidadaha Google ee caajiska nooc kale oo tilmaame ah oo ku saabsan iPhone-kaaga, ha moogaanin.
Baahin baahsan ayaa lagu cusbooneysiiyay Voice Boost 2 iyo taageerada AirPlay 2
Abka caanka ah ee lagu dhagaysto Podcast, Overcast, waxaa lagu cusbooneysiiyay Cod Xoog Kordhin 2 iyo taageero Apple AirPlay 2
Kuwani waa 117 emoji cusub oo aan ku haysan doonno iPhone dhammaadka sanadka
Mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah 117 emoji cusub oo aan ku haysan doonno qalabkeenna ka hor dhammaadka sanadka ayaa horay loogu soo bandhigay barta emojipedia
Iska caabinta Apple ee hillaaca ka soo horjeedka USB ee ay u baahan tahay Midowga Yurub waxay yeelan kartaa taariikh uu dhacayo
Codadka lagu taageerayo hirgelinta dekedda USB C ee dhammaan aaladaha elektarooniga ah waxay ku guuleystaan ​​Midowga Yurub.Maxaa ku dhici doona Danab?
Apple iyo Broadcom waxaa lagu xukumay inay bixiyaan $ 1.100 bilyan oo ay siiyeen shirkadda CalTech ee ku xadgudubka sharciga
Dacwadda CalTech ee ka dhanka ah Apple 4 sano ka hor waxay ku kici kartaa shirkadda Tim Cook ku dhowaad $ 900 milyan
Aqoonsiga taabashada dhinaca iyo shaashadda LCD ee iPhone 2021
Saadaalinta Ming-Chi Kuo ayaa xoogaa la yaab leh qaabka 2021, haa, waxay ka hadlaysaa qaabka iPhone-ka ee sanadka soo socda
IOS 13 iyo iPadOS 13 ayaa xukuma firmware waxayna koraan xawaare
Labada macruufka 'iOS' iyo 'iPad' labadaba waxay si cad u xukumayaan qalabka iyo qalabka qalabka maanta la heli karo.
IPhone 11 wuxuu ahaa nooca ugu iibinta wanaagsan Apple intii lagu jiray bishii Diseembar
Kadib daabacaadda natiijooyinka, Tim Cook wuxuu xaqiijinayaa kobaca weyn ee iPhone 11 isagoo ahaa aaladda ugu iibinta badan Apple ee 2019.
Sida loogu qaado liisanka darawalnimada iPhone
Hadda ugu dambeyntii waxaad toos ugu qaadan kartaa liisankaaga wadista si toos ah taleefankaaga gacanta mahadnaqa dalabka rasmiga ah ee 'miDGT', waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Toban sano oo iPad ah, horudhaca dhabta ah ee iPhone
Xusuusnow markii iPhone ahaa wax soo saarka yar ridiculously? Waxay ahaayeen 3,5 inji khiyaali saafi ah laakiin kuma filna waxyaabo badan, ...
Powder, tani waa cinwaanka fiidiyowga cusub ee cajiibka ah ee "Shot on iPhone"
Shot-ka cusub ee iPhone-ka ee laga helay Apple waxaa cinwaan looga dhigay Powder wuxuuna na siinayaa daawasho baraf, baraf baraf iyo buuro baraf wata.
Tim Cook wuxuu u baroordiiqayaa geeridii Kobe Bryant
Tim Cook wuxuu u baroordiiqayaa geeridii Kobe Bryant. Farriin qalbi furan oo ka socota agaasimaha Apple ee bartiisa gaarka ah ee Twitter oo muujineysa tacsi.
Apple wuxuu ka go'ay Midowga Yurub, hal xeedho oo keliya ayaa gaabinaysa hal-abuurnimada
Raac saabuunta opera ee hal xeedho oo Midowga Yurub doonayo inuu soo rogo. Apple way diidday cashuurta, iyada oo ku andacoonaysa inay noqonayso dhamaadka hal-abuurnimada.
Tetris wuxuu ku soo noqonayaa iPhone-ka isagoo ka galaya albaabka hore
Ciyaarta oo aan waligeed ka bixin qaabka ayaa ku soo noqotay macruufka App Store bilaash iyo dib ugu noqoshada asalkeedii asalka ahaa, hadda waad kala soo dagsan kartaa Tetris macruufka.
Sonos way joojin doontaa taageerida qalabkeeda duugga ah bisha May
Sonos waxay go'aansatay inay joojiso taageerida dadka da'da weyn ee ku hadla buugooda, bedelkeedana waxay na siineysaa inaan ku cusbooneysiino kuwan ku hadla qiimo dhimis 30% ah.
NYPD waxay dajineysaa $ 10 milyan oo sheybaar ah oo lagu jabsado iphone, ilaa iyo hadana ma aysan guuleysan.
IPhone 12 wuxuu u beddeli karaa cagaarka habeenka buluug buluug ah
IPhone 12 wuxuu u beddeli karaa cagaarka habeenka buluug buluug ah. Xanta ayaa tilmaameysa isbedelka midabka ee mustaqbalka iPhones Pro laga bilaabo cagaar ilaa buluug.
Pegatron wuxuu rabaa inuu u wareejiyo wax soo saarkooda Vietnam
Soo saaraha ugu dambeeyay ee ay Apple u adeegsatay isku ururinta iPhone-ka ayaa raadinaya dhul ku yaal Vietnam si wax soosaarka looga saaro Shiinaha.
Apple miyuu i ilaaliyaa markaan daalacanayo internetka?
Amni miyaan ku isticmaalayaa iPhone ama Mac? 9 tilmaamood si loo ilaaliyo aqoonsigaaga iyo macluumaadkaaga muhiimka ah intaad internetka ka baareyso oo aad isticmaaleyso barnaamijyo.
Maxkamadeynta Apple ee ka dhanka ah injineerka qashinka ah: 2 illaa 1 illaa iyo hadda
Apple v. Chip injineer dacwad: 2 ilaa 1 ilaa hadda. Shirkaddu waxay ku eedeeysaa Williams inay madax-bannaan tahay iyadoo ka faa'iideysaneysa tikniyoolajiyadeeda 'chip'.
Facebook wuxuu dejiyaa fikradda xayeysiinta ee WhatsApp
Facebook ayaa hakinaya fikradda xayeysiinta ee WhatsApp. Hadday sidaas tahay, barnaamijku waa inuu ogeysiiyaa isticmaalayaasha, taasina waxay ka dhigeysaa Zuckerberg inuu ka labalabeeyo.
Fitbit smartwatches waxay bilaabaan inay cabiraan qadarka oksijiinka dhiiga kujira
Shirkadda Fitbit ayaa hadda ka horreysa Apple mar labaad waxayna bilawday inay soo bandhigto muuqaal cusub oo ...
Waxaad hadda isticmaali kartaa iPhone si aad ugu abuurto furayaasha amniga Google
IPhone hadda waa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro furayaasha amniga ee Google. Waxaad ka furaysaa iPhone-ka oo wata ID ID-ga oo waxaad u diri kartaa ok adigoo adeegsanaya Bluetooth kombiyuutarka.
Morning Show wuxuu helayaa abaalmarintiisii ​​ugu horreysay iyada oo loo marayo Billy Cudrup
Apple waxay heshay abaalmarintii ugu horreysay ee loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee loo yaqaan 'Billy Cudrup' oo ay la socoto taxanaha The Morning Show
Slofies iyo asturnaanta ku saabsan iPhone waa laba fiidiyow oo cusub oo ka socda Apple Spain
Laba fiidiyow oo cusub ayaa ka soo muuqanaya kanaalka Apple ee YouTube kana mid ah Spain kuwaas oo ay na tusayaan ballanqaadka Asturnaanta iyo Slofies
MacX MediaTrans, bedelka ugu fiican ee iTunes oo hadda laga heli karo suuqa
MacX Media Trans waa beddelka saxda ah ee iTunes hadda maadaama aan hadda laga heli karin nooca ugu dambeeyay ee macOS Catalina.
Sida loo adeegsado saamaynta cusub ee Boomerang barta Instagram
Waxaan ku tusineynaa sida loo isticmaalo saameynta cusub ee Boomerang ee barta 'Instagram' oo aan wax uga bedelno Sheekooyinka sida pro mahadsanid astaamaha cusub.
Ku habee AirPods Pro midabyo badan oo leh ColorWare
Haddii aad ka mid tahay kuwa jeclaan lahaa inay lahaadaan AirPods midabyo aan caddaan ahayn, ColorWare ayaa xal u leh.
Shaqaalaha Dadweynaha San Francisco Hada Waxay Isticmaali Karaan iPhone
Waa maalin wanaagsan shaqaalaha dowladda ee San Francisco, hadda waxay awoodi doonaan inay mar kale isticmaalaan taleefannadooda iPhone-ka ka dib in ka badan nus sano oo mamnuuc ah.
Apple waxay raadisaa sawirro wanaagsan. Wuxuu abaalmarin doonaa 5-ta sare
Apple waxay raadisaa sawirro wanaagsan. Waxay abaal marin doontaa 5-ta sare. Shuruudda keliya ayaa ah in lagu qaato mid ka mid ah saddexda nooc ee iPhone 11 ee habka habeenkii ah.
LIFX waxay soo bandhigaysaa Nalalka Nalalka casriga ah ee CES 2020
Saddex nal oo cusub oo LIFX ah ayaa lagu soo bandhigay CES. Xaaladdan oo kale, waxay yihiin nalalka caqliga leh ee leh nashqadda nalka
Falanqeeyaha Goldman Sachs ayaa sheegay in Apple ay waayi doonto saddex meelood meel qiimaheeda sanadka 2020
Sannadkaan hadda bilownay wuxuu Apple ku noqon karaa mid aad ugu adag sida uu sheegay Goldman Sachs, maadaama ay lumin karto saddex meelood meel qiimaheeda.
IPhone-ka cusub ee SE2 ama iPhone 9 ayaa lagu arki doonaa iyagoo daadanaya
Hadda iPhone SE2 ama iPhone 9 loo maleynayay in Apple dhawaan soo bandhigi doonto waa la dusiyay, miyaan ugu dambeyn heli doonaa iPhone-ka raqiiska ah?
Apple waxay dib u dhigi kartaa soosaarida iPhone 5G mmWave illaa 2021
Apple waxay dib u dhigi kartaa soosaarida 5G iPhones oo leh moobilada mmWave illaa 2021, iyagoo sii deyn doona moodooyinka 2020GHz 5G ee 6.
Apple wuxuu soo saaraa fiidiyow cusub oo taxane ah "Shot on iPhone Experiment"
Apple waxay soo saareysaa fiidiyow cusub oo taxane ah "Shot on iPhone Experiment". Qeybtan afraad waxaa si buuxda loogu duubay iPhone 11 Pro.
9-ka taleefan ee casriga ah ee ugu firfircoonaa Mareykanka sanadkan Kirismaska ​​dhammaantood waxay ahaayeen iPhones
9-ka taleefan ee casriga ah ee ugu firfircoonaa Mareykanka sanadkan Kirismaska ​​dhammaantood waxay ahaayeen iPhones. Kaliya tobnaad ma ahan Apple, laakiin wuxuu ka yimid Xiaomi.
Dhamaadka sanadka, in ka badan 100.000 milyan oo farriimo ayaa waxaa diray WhatsApp
Dhamaadka sanadka, in ka badan 100.000 milyan oo farriimo waxaa dunida oo dhan u diray WhatsApp, iyada oo in ka badan 12.000 milyan oo sawirro ah
IPhone-yada soo socda ayaa la filayaa inay yeeshaan shaashado khafiifa oo wax ku ool ah
IPhones-ka 2020-ka ee soo socda ayaa la filayaa inay yeeshaan muuqaal khafiif ah oo suurtagal ah inay soo bandhigaan LG Display.
Waa maxay muuqaalka QuickTake ee iPhone 11 Pro?
Shaqada kaamirada ee loo yaqaan 'QuickTake' waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah uga baxno inaan sawir ka qaadno iPhone 11 Pro aan qaadno muuqaal
Aqoonsiga taabashada ayaa ku laaban kara iPhone-ka 2020
Xanta cusubi waxay soo jeedineysaa in Aqoonsiga Taabashada uu dib ugu laaban karo xadka iPhone-ka sanadkan iyada oo aan la siinin Face ID waqti kasta
Maya, iPhone Night Shift kaama dhigi doono inaad si fiican u seexato caawa
Difaacaha Wareegga Habeenkii ee iPhone-ka? Waa wax aan qiimo lahayn ... Daraasad ayaa sheegeysa in qaabkani uusan wax ka taraynin qaabkeena hurdada, wayna uga sii daraysaa ...
Sida loo kaydiya WhatsApp-kaaga ku wada sheekaysiga iCloud
Sida loo kaydiya WhatsApp-kaaga ku wada sheekaysiga iCloud. Xusuusnow in barnaamijkani uu kaydinayo taariikhda wada sheekaysiga ee iPhone-ka, oo aanu ku xidhnayn server-keeda.
Sida loo masixi iPhone, iPad ama Mac ka hor inta aan la iibin
Sida loo masixi iPhone-kaaga, iPad-ka ama Mac-gaaga intaadan iibinin, ama ku celin dukaanka. Waa lagama maarmaan in la tirtiro dhammaan macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Waa maxay nooca loo yaqaan 'miniLED' ee ay Apple-yada soo socda ee iPad iyo Mac yeelan karaan
Apple wuxuu bilaabi karaa inuu adeegsado shaashado miniLED ah iPad-ka soo socda iyo Mac ee la bilaabi doono, waana sharxeynaa waxa ay ka kooban tahay tikniyoolajiyaddan.
Apple waxay la wareegtay 66% wadarta macaashka ay soo saartay warshadaha casriga ah
Apple weli waa shirkadda lacagta ugu badan ka sameysa warshadaha taleefannada, in kasta oo aysan hadda uruurin ku dhowaad 100% faa'iidooyinka.
2020 iPhones waxay lahaan doontaa xasilinta muuqaalka kamaradda oo leh xagal ballaadhan
Wax walba waxay umuuqdaan inay diyaar yihiin si IPhone-ka ay noo soo bandhigaan inta lagu jiro sanadka 2020 ay yeeshaan xasilinta indhaha iyadoo ay ugu wacan tahay farsamada dareemayaasha shif-shif.
Miyaa lagu siiyay xoogaa AirPods ah? Tilmaamaha qaarkood si aad u bilowdo
Miyaa lagu siiyay xoogaa AirPods ah? Waxaan ku tusineynaa talooyin aad ku bilaabi karto adeegsiga, hadey yihiin Airpods ama kuwa cusub ee AirPods Pro
Qaar ka mid ah ciyaaraha lagu taliyay Apple ee Apple Arcade ciidahan
Apple wuxuu bilaabayaa fiidiyoow dhowr ciyaarood oo Apple Arcade ah si loogu dhiirrigeliyo iyaga xilliyada ciidaha
Xogta u gudbinta iPhone-ka dayax gacmeedyadu runtii waa mashruuc Apple ah
Apple waxay lahaan lahayd koox khaas ah oo ka shaqeyneysa inay si toos ah xogta uga gudbiyaan dayax gacmeedka una diraan iPhone. Mashruuc hadda ka bilaabmay Cupertino
Apple wuxuu qeexayaa shuruudaha MFi ee ah nalalka la jaan qaadi kara iPhone
Ragga ka socda Cupertino waxay keenaan shahaadada Mfi ee ololka dibedda si ay ula xiriiraan iPhone 11 gudaha.
Baahida loo qabo isticmaalka VPN-ka iPhone-ka
Maaddaama sannado ay sii socdaan oo aan aragno sida xogteennu u noqotay shay laga doonayo dhinaca ...
MacX Video Converter Pro: Beddelaan, Tafatir, Soo Degso 4K Videos (Bixin Gaar ah)
Haddii aad raadineyso codsi aad ku beddeli karto inta u dhexeysa qaababka fiidiyowga, MacX Video Converter Pro waa codsiga ugu fiican ee hadda laga heli karo suuqa
Dhamaan wararka xanta ah ee ku saabsan iPhone-ka laga soo bilaabo 2020 ilaa maanta
Naqshadaynta iPhone-kan oo leh dhinacyo fidsan ayaa ka yaabiyey shabakadda
Waxay umuuqataa in wararka xanta ah ee ku saabsan imaatinka iPhone-ka sanadka soo socda aysan joogsan oo fiidiyowgaan waxaan ku arki karnaa musharax macquul ah
Laba iyo toban South ayaa bilaabaya AirSnap Pro cusub, kiiska ugu fiican ee AirPods Pro
Ragga ka socda Twelve South waxay bilaabayaan AirSnap Pro cusub, kiis kaas oo looga ilaalinayo AirPods Pro cusub dhibcaha iyo xoqida.
Caqabadaha sanadka cusub ayaa soo laabtay maqnaanshihiisa sanadka 2019
Inta lagu jiro maalmaha ugu horeeya ee 2020 waxaan awoodi doonaa inaan helno bilado gaar ah caqabadaha sanadka cusub, Apple ayaa saxday.
Kirismasku wuxuu u yimaadaa VideoProc qiimo dhimis 60% ah [All-in-one video editor]
Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaya, waqti sanadka ka mid ah oo qoysas badani fursad u ...